I-Hebei Maoheng Machinery Co, Ltd ibhizinisi elenza ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa nokuhlinzeka ngemishini yokucubungula imbewu nokufaka okusanhlamvu. Le nkampani inezimboni ezithuthukile, imishini yokukhiqiza yesimanje nekhwalithi ephezulu, ukusebenza kahle kwebhizinisi te ...
IMaoheng inkampani yemishini yangemva kokuthengisa ithimba lensizakalo livakashela ipulazi lekhasimende futhi likhulume ngomshini wokuhlanza imbewu.
IMaoheng inkampani yemishini yangemva kokuthengisa ithimba lensizakalo livakashela ipulazi lekhasimende futhi likhulume ngomshini wokuhlanza imbewu. Imishini ingumthamo omkhulu, ukucacisa okuphezulu, inhlanganisela yokuhlanza umshini onekheshi elingaphukile, isistimu yokuhlanza uthuli ephindwe kabili, isistimu yesikrini somoya ephindwe kabili, i-vibrat ...
Namuhla, Umshini wokuhlwanyela imbewu ngohlelo lokususa uthuli wahlolwa epulazini lekhasimende, ikhwalithi enhle nempilo ende, kufanele uthenjwe.
Namuhla, Umshini wokuhlwanyela imbewu ngohlelo lokususa uthuli wahlolwa epulazini lekhasimende, ikhwalithi enhle nempilo ende, kufanele uthenjwe. I-5XZC yochungechunge lwe-air screen cleaner iyisisekelo semishini yokuhlanza ehlanganisa ukuhlukaniswa komoya nokuhlolwa.Umsebenzi wokuhlukanisa umoya womshini ngu-m ...